Nwa akwukwo nke nwa akwukwo nke Saint Lucia | Amaala nke Saint Lucia
Oge nwa akwukwo nke Saint Lucia
Citizensmụ amaala site na mentlọ Akụ Ego ga-atụle ngwa maka ụmụ amaala ya na nsonaazụ ya nwere ike ịbụ inye, gọnarị ma ọ bụ gbuo oge maka ihe kpatara ya, ntinye akwụkwọ maka ụmụ amaala site na itinye ego.
Oge nhazi oge site na nnata nke ngwa gaa na ngosipụta nke nsonazụ ahụ bụ ọnwa atọ (3). N’ebe, n’ọnọdụ ndị dị iche, a na-atụ anya na oge nhazi ga-anọ ogologo oge karịa ọnwa atọ (3), a ga-agwa onye nnọchianya maka ihe kpatara igbu oge a tụrụ anya.
Aga-etinye akwụkwọ anamachọihe maka nwa amaala ya na akwụkwọ elektrọnik na mpempe akwụkwọ ikike sitere na onye nnọchite anya ya.
A ga-emerịrị ntinye akwụkwọ niile n'asụsụ Bekee.
Akwụkwọ niile edepụtara na ngwa ahụ ga-abụrịrị n'asụsụ Bekee ma ọ bụ ntụgharị edepụtara edepụtara n'asụsụ Bekee.
NB: Ntughari aka di nma putara na ntughari aka oru nke onye oka iwu, ndi ochichi, ndi mba n’uwa ma obu ndi ochichi nke ozo kwuru, ma obu na emeputara ya na obodo ebe ndi ochichi a na-enwetaghi ikike hotara. ntụgharị nke ụlọ ọrụ nke ọrụ ya ma ọ bụ azụmaahịa ya na-emetụta ntụgharị ọkachamara.
Akwụkwọ niile na-akwado akwụkwọ ga-etinyerịrị na ngwa tupu ha na Ngalaba hazie ya.
Ngwa niile a ga-esonyerịrị usoro achọrọ maka nkwụghachi ụgwọ na ụgwọ ịdị larịị maka onye anamachọihe ahụ, nwunye ya na onye ọ bụla ọzọ.
A ga-enyeghachi ndị enyere ikikere iji mpempe akwụkwọ ezughị ezu.
Ebe enyere ngwa maka ikike ịbụ ụmụ amaala site na itinye ego, Ngalaba ga-eme ka ndị ọrụ ikike mara na a ga-akwụrịrị ego ruru eru ma kwụrụ ụgwọ nchịkwa gọọmentị tupu enwetara Asambodo ụmụ amaala.
Ebe agọnarịrị akwụkwọ anamachọihe, onye anamachọ nwere ike ide akwụkwọ site na Mịnịsta ahụ nyocha.